ဦးသိန်းညွန့် လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းပြောကြားမူအပေါ် ဖြေရှင်းချက် ~ Rohingya Blogger
ဦးသိန်းညွန့် ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ သကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊၊
လူကြီးမင်းခင်ဗျား- နှစ်ပေါင်း(၂ဝ) ကျော် NLD ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အာဏာရှင်စနစ်၊ အာဏာရှင်ဥပဒေ၊ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ကိုင်တွယ်ပုံများကို ဝေဖန်ရှုံချ၊ အတိုက်အခံပြုခဲ့သဖြင့် လူကြီးမင်းကို လေးစားလောက်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်းအဖြစ် ပြည်သူက ရှုမြင်ခဲ့သည်၊၊
သို့သော် လူကြီးမင်းသည် တိုင်းပြည်တွင်းစနစ်နှင့် တရားဥပဒေများ ပြောင်းလဲရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ပေါ်အသက်ဝင်လာရေးကို အလေးမထားဘဲ ရာထူးရရှိရေး၊ လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်နုိုင်ရေးကို ဦးစားပေးလျှက် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ကာ ပါတီသစ်ထူထောင်​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်၊၊ ယခင်ရရှိခဲ့သော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဟူသည့်သိက္ခာကို သကန်းကျွန်းမြီု့နယ် က ပြည်သူများကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်၊၊ လူကြီးမင်းအားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထောက်ခံခဲ့၍ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်နေပါသည်။ ယခုလွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီ ဆန့်ကျင်သော ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကို ပြက်ရယ်ပြုသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
နိုင်ငံသားအရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးဟုဆိုကာ ကဗျာမဆန်သင့်ဟု ယခုစတုတ္တအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်ကို အရေးစိုက်ရန်မလိုဟု ဆိုလိုခြင်းလော့။ ယခင် NLD ပါတီမှာရှိစဉ်က ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းမှာ NLD တွင် ရာထူးရရှိရေးအတွက် ဟန်ဆောင်ကြွေးကြော်ခြင်းလော့။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အတု၊ မမှန်မကန်များ၊ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပါတယ်ဟု လွှတ်တော်အတွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်သည် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေသစ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော ကဒ်ပြားဖြစ်သည်။ ဤတွင် ဦးသိန်းညွန့်က အာဏာရှင်စနစ်အတွင်း ၁၉၈၂ ခုနှစ်ပြ ခဲ့သော နိုင်ငံသား ဥပဒေသစ်ကို မှန်ကန်မျှတသည့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေဟုဆိုလိုခြင်းလော့။ ထိုဥပဒေမှန်ကန်လျှင် အာဏာရှင်ခေတ်က တခြားဥပဒေများလည်း မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆရပေမည်။ ထိုသို့ဥပဒေရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး မှန်ကန်သည်ဟု ဦးသိန်းညွန့်က သတ်မှတ်သည်ဆိုလျှင် ယခင်က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ မှားယွင်းပါသည်ဟုဝန်ခံတောင်းပန်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
1.A study of languages spoken in Burma Empire by Francis Buchnan 1798 2.Classical Journal for (September and December) 1811,Vol.IV.(London) 3.Grammaticae, Lexica,collection vocabuclorum(1815,Berlin) 4.An Account of Arakan by Major R.E Robert June, 1777(Chittagong)
အထက်ပါစာအုပ်များကို လေ့လာလျှင် လွှတ်တော်အမတ်မင်း ဦးသိန်းညွန်း ကရိုဟင်ဂျာသည် ယခုပေါ်လာသော နာမည်သစ်မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှေးပဝေသဏီကပင် မူဆလင်များကို ခေါ်ဝေါ်သော နာမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ထို ရိုဟင်ဂျာသည် ရခိုင်ပြည်နယ် လူဦးရေစုစုပေါင်း တစ်ဝက်ထက်ပိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိသွားပြီး၊ လာမည့်လွတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆွေးနွေးလာလျှင် အမှားပြောမိသည်ကို ပြင်ဆင်ပြီး၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ပါရှိသည့် အမှန်အတိုင်း တင်ပြဆွေးနွေးပါမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်းဟူသည် အမှန်ပေါ် ရပ်တည်ပြီး၊ အမှားပြောမိခဲ့လျှင် ဝန်ခံနိုင်သော သတ္တိရှိရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက လူလိမ်၊အတ္တကိုယ်ကျိုးသမား၊ ရာထူးအာဏာ မက်သော သူသာဖြစ်ပေမည်။
ဦးသိန်းညွန့်ခင်ဗျား၊ စာတမ်းလေးကိုသည်းခံပြီး ဖတ်ရှုနိုင်သောသတ္တိမွေးပါမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အာဘူအာနင်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးစုထဲတွင် မပါဝင်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့် က ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်သို့ တရားဝင် တင်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်သတင်းယူနေသော Popular News Journal ၏ သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။ Newer Post
Anonymous26 July 2012 15:11The “Bamar” have been practicing "Great Bamar Policy" long ... We Chin nationals are also being pressed and divided ruled ... many Chin orphans are brought back to their region and made Buddhist monks and send back to Chin province in order to promote their Buddhist religion ... Complicate ruling religion and politice is the deeds of Army ... We don't like it ... Actually Genocide attemptas have also been occurringall over the country and in all national’s areas.ReplyDeleteAdd commentLoad more...